ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၂)
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၂)
တင်မိုးနိုင်အိမ်က ပြန်လာကတည်းက မိမိမျှော်လင့်ချက်တွေလား ပူလောင်နေတဲ့ အပူမီးတွေကို ငြိမ်းဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တွေလား တစ်ခုမှကို အထမမြောက်။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ့်ကိုကို ရှက်ဖို့အလွန်ကောင်းနေပါပြီ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အပူမီးလေးကို အတင်းမီးမွေးပြီး မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေ အဆင့်အတန်းတွေ သတိလက်လွတ် အားလုံးရေစုန်မျှောလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်နဲ့တူနေပြီ။ နောင် တင်မိုးနိုင်ရှေ့မျက်နာတောင်မပြရဲအောင်ပါပဲ ။ စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့နဲ့မို့ အိမ်လည်း မပြန်ချင်သေး။ အချိန်ကလည်း ညနေစောင်းနေတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ချိန်းလိုက်တယ်။ နိုက်ကလပ်မှာ ဘီယာသောက်မယ် အခြေအနေပေးရင်း ဟိုကောင်တွေ အရင်ကမြှောက်ပေးလို့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စော်ကိစ္စတွေပါ အကုန်လျောက်လုပ်မယ် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်။
သူငယ်ချင်းတွေကို မိမိချိန်းတဲ့ နိုက်ကလပ်က ဘီယာဘားမှာ တစ်ယာက်ထဲ ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်။
သိပ်မကြာပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေရောက်လာပြီး ဘီယာလေး စသောက်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထူးထူးခြားခြား အပြုအမူ တအားပျော်နေကြသလို ကျွန်တော့် စိတ်တိုင်းကျ ဒီညဘီယာကို မူးအောင်သောက်၊ နည်းနည်းမှန်လာတော့ စော်တွေခေါ် သီချင်းဆိုခိုင်း ကခိုင်းနဲ့ အခြေအနေ အတော်ကောင်းနေပြီ။ ပျော်လိုက်တာလည်း ပြောမနေပါနှင့် တင်မိုးနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ညစ်တာတွေတောင် ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ပါဘူး။
သီးချင်းသံ ဆူညံသံနဲ့အတူ ပျော်နေတုန်း ဖုန်းဝင်လာတယ်။ နည်းနည်းလည်း မှန်နေတော့ ဖုန်းကိုမနည်းထုတ်ကြည့်လိုက်တာ မျက်လုံးပြူးပြီး ခေါင်းကျိန်းသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖေနဲ့ အမေနိုင်ငံခြားကနေခေါ်တဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဖုန်းကို ပြန်မဖြေခင် ဒီနိုက်ကလပ်ထဲက အသံတွေ အဖေနဲ့အမေကြားလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဆိုင်အပြင်ကို အမြန်ပြေးထွက်လိုက်ပြီး ...
“ ဟဲလို...ဟဲလို အဖေလား ..”
“ အေး... သားး မင်းဖုန်းကိုခေါ်နေတာ ၄ ခါရှိပြီသား ဖုန်းလေးတောင်မကိုင်နိုင်ရအောင် မင်း .....ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ.. မင်းအမေက စိတ်တွေတောင်ပူနေပြီ...”
“ ဘာမှလုပ်ဘူး အဖေ သူငယ်ချင်းတယောက် မင်္ဂလာဆောင်မလို့ အဲဒါ မနက်မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေး အတွက် သူတို့ အိမ်ရောက်နေလို့ပါ ..”
“ မင်းပေါင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်း လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ် ငါမသိတဲ့လူ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ .... ပြော ... ဘယ်သူသားလဲ ”
“ ဟို... အဖေ မသိပါဘူး သူ့ကို .... လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်ထဲကပါ....”
“ အေး.. သား... နေပါအုန်း မင်း အရက်တွေ ဘာတွေသောက်ထားလား ..”
“ ဟာ အဖေကလည်း မသောက်ပါဘူးဗျ....”
“ မသိပါဘူး အသံတွေက ပြောင်းနေလို့ အေးပါ ကြည့်နေပါ မင်းလည်း ငယ်တော့တာမှ မဟုတ်တာ အရင်လို နေရာတကာ လျောက်ပြောရမဲ့ အရွယ်လည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေပါ။ မင်းကို ငါပြောနေ မေးနေရတာလည်း တခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ မင်း အမေကို ပြန်သတင်းပို့ရအုန်းမှာ မို့ပါကွာ..”
အဖေပြောနေတဲ့ စကားကို သိပ်အာရုံမရတော့ပါ။ ကျွန်တော့ရှေ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက မြင်ကွင်းက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆောင်နေတယ်။ ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ဟို ပန်းရောင်းတဲ့ အပေအတေမလေး သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် စတိုင်ကျကျ ၀တ်စားထားလို့လားမသိ၊ အတော်လှတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါလား။ ဒါပေမဲ့ ည ၁၀နာရီကျော်နေပြီ ခုထိ အိမ်မပြန်သေးဘူး။ ဘာလုပ်နေလဲ မသိဘူး။
“ သား ...ဟဲလို.. သား... ဟေ့ကောင်..”
ခုမှ အဖေနဲ့ ဖုန်းပြောနေတာကို သတိရတယ်။ လန့်ဖြန့်ပြီးတော့ ....
“ ဟဲလို အဖေ.. အဖေ.... ဟဲလို...အဖေရေ လိုင်းတွေက တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ အဖေရေ... ”
“ အေးကွာ ..ဖုန်းခေါ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးကွာ.... ”
“ ဟဲလို ..ဟဲလို အဖေ ..အယ် ပြောတုန်း လိုင်းက ဂျစ်ဂျစ်နဲ့....”
“ ဟဲလို သား..”
“ ဟဲလို ..သားရေ..”
ဖုန်းလိုင်းမကောင်းလို့ လိုင်းပြုတ်ကျသွား တဲ့ပုံစံနဲ့ လိမ်ပြောပြီး ဖုန်းကိုချ တစ်ခါထဲ ပိတ်လိုက်ပစ်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဟိုအပေအတေမလေးနောက်ကို လိုက်မလို့ပါပဲ။ ငါစိတ်တွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာတာလဲ မသိတော့ဘူး။ ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ကိုသာ လိုက်လုပ်ကွာ သွား ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်။
ဟို အပေအတေမလေး ပလတ်ဖောင်းအတိုင်းလမ်းလျောက်နေတာကို ကျွန်တော့်ကားလေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်ရင်း အရိပ်အခြေအနေ ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ကြာတော့ မထူးပါဘူး ဆိုပြီး သူဘေးနားကပ် ကားကိုတုန့်ကနဲ ရပ်လိုက်တော့ သူလက်လေးနှစ်ဖက်ကို သူ့ရင်ဘက်ပေါ်တင်ရင်း လန့်သွားတယ်။ နောက် တစ်ချက်ကြောင်ကြည့်နေပြီး ကျွန်တော် ကားမှန်လေး ချပြီး သူ့ကို ကြည့်နေတော့မှ....
“ ဟယ် ..ဦးလေး... ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ..”
“ အဲဒါ နင့်ကို မေးရမှာ ၁၀ နာရီကျော်နေပြီ အိမ်ကို မပြန်သေးဘူးလား.. ဘာလုပ်နေတာလဲ...”
အထင်သေးတဲ့ အကြည့်ပုံစံနဲ့ မေးလိုက်တယ်..။
“ အယ်... ဦးလေးရယ် သမီးထီရောင်းတယ်လေ အဲတာ နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ ပြန်တာနောက်ကျနေတာ...”
“ လာလေတက် အိမ်လိုက်ပို့ပေးမယ်....”
“ တကယ်လား ဟိဟိ ဒါမှ ဦးလေးကွ...”
ကားတံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ စွေ့ကနဲ့ ၀င်ထိုင်လိုက်လာတယ်...
“ ဦလေးက သဘောကောင်းသားပဲ ...ဒီလိုမျိုးကြတော့.....”
ကားဂီယာလေးထိုး ကားလေးအသာလိမ့်ထွက်ရင်း ရှေ့ကို ကြည့်နေဟန်ဖြင့်
“ ငါ့ကို ဦလေးလို့ မခေါ်နဲ့ဟာ ငါက အခုမှ ၃၇ ပဲ ရှိသေးတယ် နင့်ဟာနင် အသက်ဘယ်လောက် ဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကို ဦးလေး ခေါ်ဖို့ မသင့်သေးဘူး”
“ ဟုတ်ကဲ့ ..ဦလေး... အဲ ဆောရီး ဒါဆို ဘယ်လို ခေါ်....”
“ ကိုကြီး ...”
“ အော် ...ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီး... ဟီးဟီး..”
“ ဒါနဲ့ နေပါအုန်း.... နင့်နာမည်လဲ ငါ မသိသေးပါလား...”
“ အော် ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီး သမီး နာမည်က ဇင်ဇင်ဇော်ပါ...”
“ သမီးလို့ မပြောစမ်းပါနဲ့ ညီမလေး ဇင်ဇင် တော်ပီပေါ့....”
“ ဟီးဟီး.... ဟုတ်ကဲ့.. ”
“ နာမည်ကလည်း ဇင်ဇင်ဇော် တဲ့ နာမည်နဲ့ လူနဲ့လိုက်တယ်...”
“ ရှင် ...ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုကြီး ... ညီမလေး နာမည်နဲ့ ညီမလေးနဲ့ က ဘာဖြစ်လို့လဲ..”
“ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး....”
“ ကိုကြီးမေးမယ်နော်... စိတ်မဆိုးနဲ့ ကိုကြီး အရက်တွေ သောက်ထားလား ”
“ အရက်မဟုတ်ပါဘူး ဘီယာပါ .... နည်းနည်း သောက်ထားတယ်...”
“ အော် ဟုတ်ကဲ့....”
“ ရှင် ..”
ကားစီယာတိုင်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ကာ ... အားတင်းပြီး သူ့ကိုမကြည့်ပဲ ရှေ့လမ်းကိုပဲ ကြည့်နေဟန်ဖြင့် ဘီယာဝေနေတဲ့ လက်ကျန်အရှိန်လေးပါရောပြီး...... စကားတခွန်းပြောလိုက်တယ်။
“ ကိုကြီးအိမ်ကို ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား အိမ်ကို ပြချင်လို့ပါ နောက်ဆိုလာလည်လို့ ရတာပေါ့......”
ပြောလိုက်ပြီလေ ကိုယ့်စကားဘယ်ကိုရောက်နေလဲ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ဆိုတာ နှစ်ဦးလုံးသိပါတယ်။ ညကြီးအချိန်မတော်မှ မူးနေတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ အိမ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့။ သူ့ဘက်ကို လှည့်မကြည့်ရဲပါ သူကျွန်တော့်ကို သေချာစိုက်ကြည့်နေတယ် ဆိုတာ လှည့်မကြည့်ပဲ သိတယ်။ အတော်ကြာ တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှ....
အိုကေ...ကားကို အိမ်ရှိရာ လှိုင်ဘက်ကို ပြန်ချိုးကွေ့ရင်း။ ဟားဟားဟား... အဲလိုဖြစ်နေရမှာပေါ့ သူ့အကြောင်း ငါအကုန်သိတယ် တွဲလိုက်တဲ့ ကောင်တွေလည်း အများကြီးပဲ ပြောမရဘူး။ သူ လိုင်းတွေဘာတွေများ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး။ စကားတွေတောင် အဲလောက်ပလ္လင်ခံဖို့တောင် မသိဘူး ထင်တယ်။
ကားစက်ကိုရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကို ပြန်စဉ်းစားရင်း ပီတိလိုလိုဖြစ်မိတယ်။ တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလား စော်တွေဘာတွေတောင်တောင် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်ခေါ်တတ်လာပါလား။ ဘီယာအရှိန်လေးကလည်း ရှိသေးသမို့ သူ့ကိုရစ် သလိုတချက်ကြည့်ပြီး...
“ ကဲ ဆင်းတော့လေ ဒါ ကိုကြီးအိမ်ပဲ ...”
ခေါင်းလေးတချက်ပြန် ငြိမ့်ပြတယ်။ ကျွန်တော်အိမ်တံခါးဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်လာတော့ သူနောက်ကနေ ကပ်လိုက်လာတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ ဘယ်မှာမှ မထိုင်ပဲ တွေတွေငေးငေးကြီးရပ်နေတယ်။
“ ထိုင်လေ.. ဘာစားချင်လဲ ဘာသောက်ချင်လဲ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ”
“ ဘာမှမသောက်ချင်ဘူး ဘာမှမစားချင်ဘူး...”
သူလဲ သူ့ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ ခေါ်လာတော့ သူ့အကြောင်းသူသိ သူ့ဘ၀သူသိလို့လားမသိပါဘူး သူခိုးလူမိသလိုပုံစံ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ခုလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ၀တ်စားထားတော့လည်း ကြည့်ရတာ တကယ့်ကို မိန်းမကောင်း ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ရင်သားကလည်း တကယ့်ကို ဆွဲဆောင်နေတယ်။ ခုမှထပ်ကြည့်မိတယ် ခြေဖျားလေးတွေဆို သွယ်တန်းပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတာပဲ အသားအရေကလည်း ခပ်လတ်လတ်မို့ သူ့အကျင့်စာရိတ္တတခုကလွဲလို့ ဘာမှကို အပြစ်ပြောစရာ မရှိပါ။ ဟိုကောင်တွေ ပြောသလို လုံးလိုက်ရရင်တော့ ဆွေမေ့မျိုးမေ့ တသက်စွဲမယ်ဆိုက်ပဲ။ တွေးသာတွေးနေရတယ် ကိုယ်မလုပ်ဖူးတဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့လား မသိ ခြေဖျား လက်ဖျားတွေအေးနေသလို ရင်တွေလည်း တအားကို ခုန်နေမိပြီ။ မနည်းဟန်လုပ်ပြီး တကယ့်ကျားစတိုင် ဖမ်းနေရတယ်။
“ ဇင်ဇင် လာလေ အပေါ်ထပ်ခန်းတွေကို ပြမယ်..”
ပြန်မဖြေပေမဲ့ ကိုယ်ရှေ့က ဦးဆောင် အိမ်ပေါ်လှေကားအတိုင်း တက်နေပြီမို့ သူနောက်က လိုက်လာနေတယ်။
“ ဒီ အိမ်ကြီးက ကိုကြီး အဖေ နဲ့ အမေ လက်ထပ်ပြီး ကိုကြီးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုကတည်းက အဖေကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲ အဖေကိုယ်တိုင်ဆောက်ခဲ့တာလေ ကိုကြီး နှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ်အဖေက သတ်မှတ်ခဲ့တာလေ..”
သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ပြောတာ သိပ်အာရုံမရဘူး ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ကိုပဲ ကြည့်နေတယ်။ မသိဟန်ဆောင်ပြီ ရှေ့ဆက်ပြောနေမိတယ်...
“ ဒါကတော့ ဘုရားခန်း ဟိုဘက်က အကို့ မိဘတွေ အိပ်တဲ့ အခန်း၊ ဒီဘက်ကတော့ အပေါ်ထပ်ဧည့်ခန်း အဖေရှိတုန်းကတော့ အဖေ အဲဒီဧည့်ခန်းမှာ ညတိုင်းညဉ့်နက်အောင် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာလေ....”
ငါ ဘာတွေပြောနေတာလဲ စကားကရှည်နေပြီ ငါအခန်းထဲခေါ်မယ် ပြီးရင် ရှယ်မယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ့် ရင်တွေအရမ်းကို ခုန်နေသလိုပျော်လဲ ပျော်နေမိတယ်။
“ ဒါ ကိုကြီးအခန်းလေ .. လာ ၀င်ခဲ့လေ..”
ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြပြီး သူအခန်းထဲကို ၀င်လာတော့ ကျွန်တော်က အခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်တော့တယ်။
"ဒါ ကိုကြီးအိပ်တဲ့ ကုတင်လေ ....”
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပြောမိပြီ။ သူ သဘောတော့ ပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
“ အော် ...ဟုတ်လား...”
သူပြောတဲ့ လေသံကတမျိုးပါလား အနေအထိုင်အပြောအဆိုလုံးဝ ပြောင်းလဲသွားသလို ခံစားရတယ်။ ရင်ထဲ နည်းနည်းထိတ်လာတယ်။ သူ့ပုံကြည့်ရတာ တကယ်တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းမတယောက်လိုလို၊ တကယ့်ဝါရင့် ပြည်တန်ဆာမတယောက်လိုလိုပဲ တစ်ချက်မှမတုန်မလှုပ်။
အခန်းကို ပတ်လည်ကြည့်ပြီး ကုတင်နားသွားကာ ကုတင်ပေါ်ရှိမွေယာထူကြီးကို လတ်နဲ့စမ်းဖိပြီး ထိုင်လိုက် လှဲလိုက် ကျွန်တော့်ကို စိန်ခေါ်နေသလိုလို။ တစ်ခါ ပြန်လူးထပြီး ကျွန်တော့ကို သေချာစူးစူးစိုက်စိုက်ကြီးကို ကြည့်နေတယ် ပြီးတော့ ... ကျွန်တော့ကို ကျောပေးပြီး သူ့အပေါ်အကျီကို ဖြည်းဖြည်းခြင်းချွတ်နေတဲ့ ပုံက တစ်ဖက်သားကို မခံချိမခံသာအောင် လုပ်နေသလိုပဲ။ အပေါ်အကျီချွတ်လိုက်တော့ မို့မောက်နေတဲ့ သူ့ရဲရင်းသား ၀င်းဝင်း အစွန်းအစကို ထင်းထင်းကြီးမြင်လိုက်ရတော့ တံတွေးတစ်ချက် မသိမသာ မျိုချမိတယ်။
နောက် သူ သူ့ထမီကို အပုံလိုက်ချွတ်ချပြီး နွဲ့နှောင်းတဲ့ အမူအယာလေးနဲ့ ကုတင်ပေါ် လှဲလျောင်းလိုက်ပုံက ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘော်လီ နဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီသေးသေး ရယ်ပဲ ရှိတော့တယ်။ တကယ်မိန်းမတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံး ဒီလိုမြင်ကွင်းကြောင့် လက်ဖျားတွေ အေးခဲတောင့်လာသလို ရင်တွေလဲ အခုန်မြန်လာပြီး ကြောင်ပြီးငေးကြည့်လျက်သား ဖြစ်နေတော့တယ်။ ကိုယ်တစာင်း လှဲလျောင်းနေတဲ့ အနေအထားမှ ပတ်လက်လှန် ပေါင်ကိုကားပြန်တယ်။ ပေါင်းကားထားရုံမျှမကပဲ သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကို ပွတ်သပ်ရင်း ..
“ လာလေ ဘာလုပ်နေတာလဲ ..ကိုကြီး ညီမကို..... --ိုး ချင်နေတာ မှတ်လား.”
သူအဲလိုကြီး မထင်မှတ်ပဲပြောလာတာကြီးကြောင့် ဘာလုပ်လိုဘာကိုင်ရမှန်းတောင် မသိတော့သလို ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
“... လာပါ လာ.. --ိုး စမ်းပါ.. ညီမလဲ အ --ိုး ခံချင်နေတာ ဟဟဟ ”
“ ဟို....ဟို... ကိုကြီး...”
“ လာစမ်းပါ ... ကိုကြီး ညီမကို ပြည့်တန်ဆာ ထင်နေတာ မဟုတ်လား ပိုက်ဆံပေးရင် ရတယ်လေ လာစမ်းပါရှင် မြန်မြန် လာ --ိုး စမ်းပါ ဒီကဖြင့် ခံချင်နေတာ ယားလို့ ”
သွားပြီ ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ သူသက်သက်ရွဲ့နေပြီ ဆိုတာ။ ငါများမှား သွားပြီလား မနူးမနပ်နဲ့ ရင်ကို ထိတ်သွားပြီ။ ကျွန်တော် သူ့ဆီကို မသွားရဲတော့ သူအိပ်ယာပေါ်ကနေ ထလာပြီး ကျွန်တော့ရှေ့လာပြီး မျက်ရည်တွေ ၀ဲနေသလို.. ခက်ထန်မာကျောတဲ့ မျက်နာနဲ့...
“ ရှင် ခု လိုကြတော့ကော မ --ိုးချင်တော့ဘူး မဟုတ်လား.. ဟင်.. ရှင်ကျွန်မကို ဘာထင်နေလဲ ကျွန်မက တကယ့် အပေအတေ အစုတ်အပြတ်ထက်တောင် ဆိုးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ မြင်နေတာလား ... ကျွန်မ ရည်းစားတွေ မှိုလိုပေါက်အောင် ထားတယ်။ ကျွန်မကြိုက်တဲ့ သူဆိုရင်ခံတယ် .. ကျွန်မကြည်ဖြူတဲ့ လူ.. ကျွန်မကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတဲ့လူဆိုရင် ကျွန်မသူ့ အ --ိုး ကို ခံတယ်၊ ဘာဖြစ်လဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ
ပြည့်တန်ဆာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ပိုက်ဆံအတွက်လေးကြောင့်နဲ့ ဒီဟာတွေကို လုပ်မစားဘူး ”
“ မဟုတ်ပါဘူး ညီမလေး ရယ် ကိုကြီး.. မှား .”
“ တော်စမ်းပါ... အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်မ ရှင့်အပေါ်မှာ သာယာနေတယ် ဆိုတာ ရှင်က ကျွန်မကို တကယ့် အပေအတေ လူဆိုးမလေးလို့ ထင်နေတာလေးကို သာယာနေတာ.. ကျွန်မက ပိုက်ဆံရလို့ ပိုက်ဆံလိုချင်တာ တစ်ခုထဲနဲ့ သူများအ --ိုး ကို လိုက်ခံနေတဲ့ မိန်းမတွေထဲမှာတော့မပါဘူး ..”
သူမ ငိုလည်းငိုရင်းနဲ့ အကျီတွေ ပြန်ကောက်ဝတ်ပြီး ပြန်တော့မယ်ဟန်ပြင်ရင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောနေလေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း အတော်မှားသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပြီ။
ကိုကြီးတောင်းပန်ပါတယ် ကိုကြီးခုတလော အမှားတွေကို တခုခုပြီးတခု မှားပြီးရင်းမှားရင်း ဖြစ်နေလို့ ညီမရယ်... ကိုကြီးတောင်းပန်ပါတယ် ညီမလေးကျေနပ်တဲ့ အထိ ကိုကြီးတောင်းပန်ပါတယ်.. ကိုကြီးမှားသွားတယ် အရမ်းမှားသွားတယ်..”
ကျွန်တော်ပြောနေတာကို သူနားမထောင်တော့ပါ အိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းသွားပြီ။ သူ့နောက်ကလိုက်ရင်း သူ့ကိုတားတဲ့ သဘောနဲ့ သူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းဆွဲတော့ သူရုန်းထွက်ပြီး အိမ်ရှေကတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး ခြံရှေ့ကို အတင်းပြေးထွက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ထပ်ဆင့်အမှားတွေကို မတောင်းပန်ပဲ ဒီအတိုင်းကြီးမလွတ်ပေးချင်တဲ့ သဘောနဲ့ သူ့ရှေ့က ကာရပ်ပြီး...
“ ညီမလေး ညီမလေး ကိုကြီးတောင်းပန်ပါတယ်.. ညီမလေးရယ်..”
“ ရှင်.....ကျွန်မရှေ့ ဖယ်နော်... မဖယ်ဘူးလား ...အော်လိုက်မှာ...”
“ ၀ူးးး.... ကိုကြီးပြောမယ် ဒီကိစ္စဒီလိုတွေ ဖြစ်ရတာ ညီမလေးကြောင့်လဲ ပါတယ်..”
မျက်လုံးလေးထောင့်ကပ် မျက်မှောင်လေးကျုံပြီး စိတ်ဆိုးဟန်ဖြင့်..
“ ဘာပြောတယ် ကျွန်မကြောင့်... ”
“ ဟုတ်တယ်...ညီမကြောင့်လည်း နည်းနည်းပါတယ်...”
“ နေပါအုန်း ကျွန်မကြောင့်လို့ ပြောရအောင်... ကျွန်မက ရှင့်ကို ဘာတွေမြူဆွယ်နေလို့လဲ.. ရှင်သေချာ စဉ်းစားအုန်းနော် ရှင်နဲ့ ကျွန်မကြားမှာ ဘာအကန့်မှ မရှိဘူး ....ပြောစမ်းပါအုန်း..”
ကျွန်တော်သက်ပြင်းရှည်ကြီးတချက် မှုတ်ထုတ်ပြီး သူ့ဆီက ပန်းဝယ်လာကနေ အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာအထိသူ့ကို သေချာရှင်းပြလိုက်တယ်..သူသေချာနားထောင်နေတယ်.. ကျွန်တော်စကား ဆုံးခါနီးလေ သူ့ရဲ့အမှုအယာက ပျော့ပျောင်းလာလို့ ပြောရတာပိုအားရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်စကားဆုံးတော့ သူကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်နေတယ်...ကျွန်တော်ကပဲ..
“ ယုံပါ ညီမရယ် အကိုဒီအသက်အရွယ်ထိ မိန်းမကိစ္စ ရှင်းတဲ့ လူတယောက်ပါ ဒီအသက်အရွယ်ထိ လူပျိုကြီး ဖြစ်နေသာတာ ကြည့်ပါတော့ ညီမရယ်ခုက အကို့မှာ တအားကို အပူတွေကြီးနေတယ် ညီမရယ်... အကိုတောင်းပန်ပါတယ်... အကို့ကို ခွင့်လွတ်ပါ..နော်. ညီမ စိတ်လေးကို နည်းနည်းလေးလျော့လိုက်နော်.... နည်းနည်းလေး.... ”
ကျွန်တော့်တောင်းပန်ရင်း အမှုအယာလေးနဲ့ပါ သူ့ကို ခယပြီးပြောလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့ကို အတော်လေးစိတ်ပြေဟန်စ ပြုရင်း..
“ ဇင် နေ့လည်ထဲကနေ ခုညထိ ဘာမှမစားရသေးဘူး ဗိုက် တအားဆာနေပြီ....”
ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးသွားတယ် သူ့ကိုသူ ဇင် တဲ့ သနားစရာ မျက်နှာပေးလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ပြောနေတော့ လူကို ထခုန်မတက်အောင် ပျော်တာလား ၀မ်းသာတာလား မသိဘူး...
“ ဇင် ရယ် မီးဖိုချောင်ထဲက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အကုန်ရှိတယ် ကိုကြီးကိုယ်တိုင် ချက်ကျွေးမယ် လာ လာ အထဲကိုပြန်ဝင်နော်...”
ကျွန်တော်ခုန်ပေါက်ပြီး မီးဖိုချောင်ကို အိမ်ထဲမှတဆင့် အမြန်ပြေးဝင်သွားတယ် သူအိမ်တံခါးပိတ်ရင်းနောက်ကလိုက်လာတယ်။ ပြီးတော့ မီးဖိုဂျောင်က စားပွဲနားက ခုံမှာ ၀င်ထိုင်နေတယ်။
“ ပြော...ဘာစားမလဲ ခေါက်ဆွဲကြော် ကြာဆံကြော်၊ အစိမ်းကြော်၊ ကန်စွန်းရွက် မှိုကြော်၊ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်၊ ကြေးအိုးချက်၊ ၀တ်သားနုပ်နုပ်စင်းကြော်၊ ကြက်စွပ်ပြုပ် ဟီးဟီး.... အဲဒါတွေ ဘာတစ်ခုမှကို မလုပ်တတ်ဘူး ဟီးးးးး....”
“ ဟွန်း .... ကိုကြီးကလည်း ဒါဆို ဇင်က ဘာစားရမှာလဲလို့ ...”
“ ဟီးးး ဘာမှမပူနဲ့ ရယ်ဒီမိတ် မာမီးခေါက်ဆွဲ ကောင်းကောင်းပြုတ်တတ်တယ်... စားမှာလား...”
“ ကောင်းပါတယ် ..မြန်မြန်လုပ်ပါ ဒီမှာ တအားနဲ့ ဗိုက်တွေ ဆာနေပြီနော်...”
“ ရက်စ် ဘော့စ် ဟိဟိ...”
ကျွန်တော်အရမ်းကိုပျော်မိပါတယ် မိန်းမတယောက်ကို ကိုယ်ကိုတိုင် ချက်ပြုတ်ကျွေးရမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထားမိခဲ့ဖူးဘူး တကယ်တမ်းချက်ကျွေးရတော့မယ် ဆိုတော့ ပျော်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း။ မာမီးခေါက်ဆွဲပြုတ်လေး ပြုတ်ပြီးပူပူနွေးနွေးကို ပန်းကန်သန့်သန့်ထဲထည့် ဇွန်းနဲ့တူလေး တပ်ပြီး သူ့ရှေ့ချပေးလိုက်တော့ အငမ်းမရစားနေလိုက်တာ ပါးစပ်ကို အပူမိပြီး သူ့လျာလေးကို သူ့လက်နဲ့ ယက်ခပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ကပဲ ကဗျာကယာ ရေအေးအေးလေး ခွက်ထဲထည့်ပြီး တိုက်လိုက်တယ်။
အယ်ဗျာ ပူနေလို့လားမသိ မျက်ရည်လေးတွေဝဲ နေတယ်။ ခုလိုကြတော့လည်း တကယ့် ကလေးလေး တယောက်လိုပါလား သူ့ကိုကြည့်ပြီး ရင်ထဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်လာတယ်။ ငါ့နဲ့တော့ကွာ ငါ့လောက်မိုက်တဲ့ကောင် ကမ္ဘာမှာ ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး မလုပ်သင့်တဲ့ အရာကို အပြစ်ကြီးကြီး လုပ်တဲ့ လူတယောက်လို ခံစားလိုက်ရတယ်။ သူ့အနားတိုးကပ်ပြီး ...
“ ကိုကြီး တကယ်တောင်းပန်ပါတယ် ..ကိုကြီး တကယ်မှားသွားတယ် ဇင် ရာ...”
ကျွန်တော်တကယ် စိတ်မကောင်းတဲ့ အမူအယာနဲ့ မို့.....သူခေါက်ဆွဲပူပူလေးကို စားရင်း ကျွန်တော့်ကို ပြူးကြည့်နေတယ်....
“ အဟတ်ဟတ်... မင်းသား အက်ရှင်ကလိုသေးတယ် ကိုရီးယားကားထဲမှာလေ မင်းသမီးလေးက ဒီလိုပဲ ခေါက်ဆွဲပူပူလေး စားနေတဲ့ အချိန်မှာ မင်းသားက မျက်ရည်တွေကျပြီး တောင်းပန်နေတာ ကိုကြီးရဲ့..... ဟဟဟဟ.. တကယ်ပဲ..”
“ အမ်.... ဟုတ်လား..”
“ မျက်ရည်တော့ ကိုကြီးမကျတက်ဘူး ဇင်ရယ်...”
အားရပါးရစားနေလိုက်တာ ခေါက်ဆွဲပြုပ်တပန်းကန်လုံး ပြောင်ရုံတင်မကဘူး နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကို ပန်းကန်လိုက်မော့နေလိုက်တာ အရမ်းကို အပြစ်ကင်းပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲလို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေမိတယ်။ ကြည့်အုန်း လည်တိုင်းလေးကလည်း ကျော့နေတာပဲ။
“ ပြီးပြီ... စားလို့လည်း ကောင်းတယ် ဗိုက်ပြည့်သွားပြီ... ကဲ.. ပြောပြ...”
“ အမ်... ဘာကိုပြောရမှာလဲ ...”
“ ဆေးရုံမှာ တွေခဲ့တယ်ဆိုတာကို သေချာအသေးစိတ်က အစပြောပြ.. စောစောက ပြောတာ အပေါ်ယံလောက်ပဲဟာကို နောက်ရီချင်နေလို့ ခုပြောပြ ”
“ ဟာ... မပြောချင်ပါဘူး.. ဇင်ရယ်.. ဟီးဟီး...”
သူ့ကြည့်ရတာ ဇွတ်နိုင်မယ့်ပုံ ပေါက်နေလို့ ရှေ့မျက်နာ နောက်ထားပြီး သေချာကို ရှင်းပြလိုက်တယ်။ ရယ်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့..။ နောက် အရယ်ရပ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို သေချာစိုက်ကြည့်နေတယ် ။ ကြည့်နေတာက မရယ်မပြုံး သေချာလေးနက်သလို စူးရှတဲ့ သူမျက်လုံးတွေက တခုခုကို လုပ်တော့မယ့်ပုံ ...
“ ကိုကြီး မိန်းကလေးတယောက်ကို နမ်းဖူးလား....”
ခေါင်းခါပြလိုက်တယ် မနမ်းဖူးဘူးပေါ့။ တကယ်လဲ မနမ်းဖူးတာကြီးကို။ တွေးနေတုန်း သူထိုင် နေရာကထ စားထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကို တခြားနေကိုထားပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်လာပြီး စားပွဲပေါ်တက်ထိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်လျက်သားနဲ့ သူ့ကိုမော်ကြည့်ရင်း ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး....
“ ခု ဇင့်ကို နမ်းကြည့်စမ်းပါ..”
မယုံကြည့်သလို သူ့ကိုတချက်ကြည့်နေမိတယ်။ လက်ညှိုးကလေးနှင့် ကျွန်တော့်ကို ယပ်ခေါ်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းနားကို တပ်ပြနေတယ် သူ့ နှုတ်ခမ်းကို လာနမ်းပါပေါ့။ ကျွန်တော်ရင်တွေ ခုန်တက်လာပြီ။ သူမျက်လုံးလေးကို မှိတ်ထားလို့နေတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ တကယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ရှေ့မတိုးရဲအောင်ပါပဲ တင်မိုးနိုင်
ကိုလုပ်တုန်းကလိုမျိုး သတ္တိတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဇင့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေက တကယ့်ကို နမ်းချင်စရာပါ။ ပါးလျသေသပ် ပိရိပြီး ပန်းရောင်သန်း နေတော့ နောက်ဆုံး အနားတိုးကပ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကပ် နမ်းလိုက်တော့တယ်။
ဘ၀မှာအနူးညံ့ဆုံး အတွေ့အထိတခုကို ခံလိုက်ရသလိုပဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိနမ်းပြီးနောက် သူ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို အသာအယာဆွဲယူ စုပ်လိုက်တော့ သူက ကျွန်တော့်အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူနမ်းနေတယ်။ ကျွန်တော်တကယ်ကို ကျေနပ်မိသလို ပျော်လွန်းလို့ ရင်တွေခုန်နေတော့တယ်။ အဲဒီလိုနမ်းနေရင်း သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ဖမ်းယူဆုပ်ကိုင်၍ သူ့ရဲ့လျှာက ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ၀င်လာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့လျှာကို ဆွဲငင်ယူသလိုလုပ်လာတော့ ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးပြီး လူကို အတော်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ခံစားမှုဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာတော် သူ့ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုနမ်းလိုက်လို့ ခံစားလိုက်ရတာက စုန်းမတကောင်နဲ့ နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းနေရာက သူ့ရဲ့လျှာက ပါးစပ်ကတဆင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အူ နုလုံး အသည်း ကျောက်ကပ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကလီစာတွေအားလုံးကို ဆွဲငင် ပိုင်ဆိုင် ချုပ်ကိုင်စားသုံးလိုက်သလိုပါပဲ။ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေမှာ သွေး မရှိသလို ခံစားရပြီး လူကိုလေထဲ မြောက်သွားသလိုပါပဲ။
ဒီလို အနမ်းခံရတာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မို့လားမသိ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးကိုမေ့မျောလို့ နေနေတုန်း သူ ကျွန်တော့်ကို နမ်းနေရာကနေ ဆက်ကနဲ့ ခွာသွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကောက်ကာငင်ကာဆိုတော့ အရှိန်ကလည်း ရှိပြီး မူးယစ်နေသလို နမ်းပြီးရင်း နမ်းချင် ဖြစ်နေတော့ မျက်လုံးလေး မှေးပြီး သူ့ကို ထပ်နမ်းဖို့ ရှေ့တိုးတော့ သူ သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလေးကို တားထားတယ်။ ကျွန်တော်တကယ်ပဲ နစ်မွန်းသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သူ့ကို အထပ်ထပ်ပြောနေမိတယ်။ ဇင် ရယ် မင်းကိုကြီးကို ဒီနေ့က စပြီးပိုင်သွားပြီး။ ကိုကြီးဆိုတဲ့ လူတယောက်ထဲကိုမဟုတ်ဘူး ကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်တာ မှန်သမျှအားလုံးကို ဇင် ပိုင်သွားပြီ။ ဇင် ဟာ ကိုကြီးရဲ့ အရှင်သခင်ပါပဲ။ ဇင် ဟာ ကိုကြီးရဲ့ ကိုယ်ပွားလေးပါပဲလို့ စိတ်ထဲကနေ အထပ်ထပ်ပြောနေမိတုန်း.... သူကျွန်တော့်ကို ပြုံးသလိုလောင်သလို ဘာမှန်းကို မသိတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတယ်...
“ ကိုကြီးက တကယ့်ကို မနမ်းဖူးတာပဲ ကိုး...ဟီးဟီး ”
ရယ်ရင်း သူပြောတာကို ပြန်မပြောနိုင်ပါ ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြရင်း သူ့ကို ဆက်နမ်းဖို့ ရှေ့တိုးလိုက်တော့ သူ့ခေါင်းလေးကို တိမ်းရှောင်ရင်း ကျွန်တော့် ရင်ဘက်ကို ဖြည်းညှင်းစွာ တွန်းကာ သက်ပြင်း တိုတိုလေး ချပြီး..
“ နောက်ထပ် ရင်ပိုခုန်ချင်သေးလား......”
မျက်နှာကို ပြောင်ချောချောနဲ့ မျက်ခုံးလေးကို ပင့်လိုက်ချလိုက်နဲ့ ပြောနေပြန်တယ်။ ကျွန်တော်စကားကို ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တော့ပါ။ ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြလိုက်တော့ ဇင်က သူ့အပေါ်အကျီလေးကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ကျွန်တော့ကြည့်ပြီး ချွတ်နေတယ်။ ဇင်ရဲ့ ပြုမှုပုံတွေက တဖက်သားကို ညင်သာနုရွသလို တထပ်ခြင်း မလှုပ်နိုင်အောင် အထပ်ထပ် ညို့ငင်ဆွဲဆောင် လိုက်သလိုပါပဲ။ သူလုပ်နေတာကို အာခေါင်မှာ ချောက်နေပြီး မရှိတဲ့ တံတွေးကို တချက်မျိုချရင်း ကြည့်နေမိတယ်။
နောက်ဆုံး အကျီချွတ်လိုက်ပြီး ဘောလီလေးပဲ ကျန်တော့ သူ ခေါင်းလေးတဇောင်းငုံ့ရင်း သူ့ဘောလီလေးကို ကိုင်ပြီး ရှက်သလို ဟန်အမှုယာနဲ့ သူ့ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ်လို့နေပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ ဘာမှကို မသိတော့ပါဘူး သူလုပ်သမျှကို အသက်မရှိတော့တဲ့ လူတယောက်လို ကြည့်နေရုံသာရှိပါတော့တယ်။ နောက် သူ လက်ကလေးကိုနောက် ပစ်ပြီး ဘော်လီကြိုးကိုဖြတ်ပြီး သူ့ဘော်လီကို ကိုယ်ကနေ ခွာလိုက်တာမှာတော့ ရင်ညွန့်နှစ်ခိုင်ဟာ ၀င်းပြီး မို့မောက် အိပြီးတွဲကျနေတော့ လှမ်းကိုင်ရမလိုလို ဘာလိုလိုဖြစ်နေတုန်း သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖတ်ကို လမ်းဆွဲယူပြီး သူ့ရဲ့ နိုအုံဆီကို တင်ပေးလိုက်တော့လက်နှစ်ဖတ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို ခံစားရလို အနူးညံ့ဆုံးအတွေထိကို ထိလိုက်ရတော့ ရှေ့ကိုတိုးပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့နမ်းမယ် အလုပ်..
“ နေအုန်းလေ သေချာပွတ်သပ်ကိုင်ပါအုန်း ဇင့် ကိုလည်း ထည့်တွက်အုန်းလေ...”
သူပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်တွန့်သွားတယ် ဟုတ်သားပဲ သူလည်း ငါ့လို ခံစားချက်ရှိတဲ့ လူတယောက်ပဲ စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖူးတော့ သူ့ကိုစိတ်ပါအောင် သေချာပွတ်သပ်ပေးသလို နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ညင်သာစွာ ပိုပြီးပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်။ သူ မျက်လုံးလေးကို စင်းနေအောင်မှိတ်ထားပြီး သူ့လက်နှစ်ဖက်က
ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ဆက်ကနဲ့ လှမ်းကိုင်ပြီး သူ့ရဲ့နို့အုံဆီသို တွန်းပို့ပြီး နမ်းဆုပ်ခိုင်းပါတော့တယ်။ အိစက်ပြီး နွေးထွေးတဲ့ အထိအတွေ့နဲ့အတူ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ နို့ကို စုပ်နမ်းရတဲ့ အရသာကိုလည်း ဘ၀င်မြင့်စရာခံစားချက်အဖြစ် တခါထဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။
ဇင် ငါ့ကို ပိုင်သလို ငါလဲ ဇင့်ကို ပိုင်လိုက်သလိုပါပဲနော်။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဇင်ရယ်။ အရှိန်လေးရလာတော့ သူ့ နို့လေးတွေကို လက်ကလည်း ပွတ်သပ်နေသလို ပါးစပ်ကလည်း ခပ်မြန်မြန်လေးဖြစ် စုပ်နမ်းမိနေတော့ ဇင့်ခမျာ မျက်လုံးကို မှေးစင်း ခေါင်းလေးကိုမော့ပြီး နောက်လှန် လွန့်လွန့်လူးလူး ဖြစ်နေရာမှ သူ့လက်တွေက သူဝတ်ထားတဲ့ သူ့ထမီကို ချွတ်နေတာကို ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ထမီကျွတ်သွားပြီးနောက် ကျန်သေးတဲ့ သူ့အောက်ခံဘောင်းဘီသေးသေးလေးကို သူခံစားနေတဲ့ ဖီးကိုလည်း မပျက်ရအောင်သဘောနဲ့ ထင်တယ် သူ့လက်တဖက်ထဲနဲ့ အတင်ချွတ်ပစ်လိုက်လေတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာအ၀တ်ရယ်မှ မရှိတော့ပါ။
ကျွန်တော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူ့နို့ကို ကုန်းစို့နမ်းနေတုန်း သူကျွန်တော့် အကျီကို လှမ်းချွတ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့် ကိုယ်ရှိန်လေး နည်းနည်းသတ်ပြီး လှုပ်ရှားပေးလိုက်တော့ အပေါ်အကျီကျွတ်သွားတယ်။
သူ တော်တော်လေးကို ဖီးလ်တအားဖြစ်နေတယ်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်သူ့ နို့တွေကို စုပ်နမ်းနေတုန်း သူစားပွဲပေါ် ဖြည်းဖြည်းခြင်း အိအိလဲကျလာသလို ကွန်တော့်ခေါင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူလက်အားတွေက အောက်သို့ အတင်းတွန်းပို့နေပြီ။ သူလက်နဲ့ တွန်းတဲ့ နေရာကို အလိုက်သင့် လိုက်မိတော့ ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက သူ့ ရွှေခရုလေး နေရာနဲ့ တန်းနေလို့ နေပြီ။ ဒီလိုဖြစ်တော့ တင်မိုးနိုင်ကို သွားသတိရမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တင်မိုးနိုင်လို ခပ်ဝေးဝေးကမဟုတ်ပဲ ဇင့် ရွှေခရုလေးက မျက်နှာနဲ့ ခြောက်လက္မအကွာလောက်သာရှိတာ မို့ ထင်းထင်းကြီး မြင်နေရတယ်။ အမွှေးအမျှင်လေးတွေက ချစ်စရာဆိုလို သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဝလေးက ပိရိပြီး စိနေပြီး ဘေးမှာ အရည်လေးတွေ စို့နေတယ် ။ သူ့ကို တချက်လှမ်းကြည့်မိတယ်။ သူကတော့ မျက်လုံးလေး မှေးစင်းရင်း ကျွန်တော့်ကိုတောင် သတိမထားနိုင်တော့ ကျွန်တော်မှာ နမ်းသင့်မနမ်းသင့် စဉ်းစားချင့်ချိန်နေပြီ .... ဘုန်းတွေဘာတွေ နိမ့်မလားပဲ ဆိုပြီးတွေးနေတုန်း ..
“ ဘာလုပ်နေတာလဲ ...”
စိတ်မရှည်သော အသံလား ဒေါသပါသော အသံလား မခံစားနိုင်တော့တဲ့ အသံလားမသိ သူဆီက ကြားရပြီး သူ့လက်ဖိအားနဲ့ အတူ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေက သူ့ရဲ့ ရွှေခရုလေး နဲ့ တခါထဲ ထပ်လျက်သား မိတ်ဆက်သလို ဖြစ်သွားကာ မထူးတော့ပြီမို့ စတင်စုပ်နမ်းလိုက်ပါတော့တယ် ....... ။
စပြီးထိတွေလိုက်ရတဲ့ အသိကတော့ သူ့ဆီကထွက်နေတဲ့ ချွဲကျိကျိအရည်လေးတွေးက ကျတော်စုပ်ယူလိုက်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်ပါးစပ်တွေမှာ ပေကျံလို့နေပြီ။ စိတ်ထဲသူ့ကို တပ်မက်မောတဲ့ စိတ် ကာမစိတ်တွေကြောင်လား မသိ သူ့ရွှေခရုလေးကို စုပ်ရင်းစုပ်ရင်း ပိုပြီး အရသာ ရှိလာသလို ခံစားရလို့ သူ့ပေါင်နှစ်ဖတ်ကို အတင်းဖြဲပြီး ကျွန်တော်လျာလေးကို အတွင်းထိရောက်အောင် ထိုးထည့်နေမိပြီ။ နောက် ရွှေခရုလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို နမ်းစုပ်နေတုန်း ...
“ အဲ ဒီဘေး နှုတ်ခမ်းသားတွေကို မစုပ်နဲ့ ဒီကို စုပ်ပေးပါ နာနာလေး...”
လူကိုတောင် မကြည့်တော့ပါလား သူက သူ့လက်ညိုးလေးနဲ့ ရွှေခရုလေး အထက်နားက အစိလေးကို ထောက်ပြလို့ သူပြောတဲ့ အတိုင်း သေချာစုပ်နမ်းပြစ်လိုက်တော့ ခါးကော့တက် ကော့တက်ကာ ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း ပါးစမ်းကလည်း အသံပေါင်းစုံပြုလျက် ဖီးလ်အပြည့်ဝင်နေပုံရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို မှုတ်ပေးနေရင်း ဘောင်းဘီကို သူမသိအောင် အသာအယာချွတ်နေမိတယ်။ ဘောင်းဘီလုံးလုံး ကျွတ်သွားတော့မှ ကိုဒုတ်ကို ပြန်ကြည့်တော့ အတော်လန့်သွားတယ် ဘယ်ထဲက လုပ်ချင်နေလဲ မသိဘူး တောင်နေတာ တဆက်ဆက်ပဲမို့ အရေကြည်လေးတွေက ထိပ်မှာ စို့နေတယ်။ ကာမဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စကို တကယ့်လတ်တွေ့လုပ်ရတော့မှာမို့ ကျွန်တော့် တအားကို လုပ်ချင်နေလေပြီ..။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို စုပ်နမ်းပေးနေတာက တဆင့် သူ့နို့တွေဆီရွှေ့သွားပြီး နမ်းစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်လက်တဖက်က မိမိရဲ့ ဒုတ်ကိုကိုင်ပြီး ဇင် ရဲ့ ရွှေခရုလေးထဲ ထည့်မယ် အလုပ်...
“ ဘာလုပ်တာလဲ ....”
“ ဘာဖြစ်လို့လဲ ...”
“ ဘာဖြစ်ရမလဲ ... ခု စစချင်းတန်းလုပ်ရင် တမိနစ်တောင် ခံမှာမဟုတ်ဘူး ဇင်က ဟတ်ကော့ကြီး ကျန်ခဲ့မှာ... နောက်တခါမှ လုပ် ”
သူ ကျွန်တော့်အား အတင်းတွန်းဖယ်၍ စားပွဲပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး ကျွန်တော့် ဒုတ်ကိုကိုင်လိုက်ရာ. မိန်းမတယောက်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အကိုင်အတွယ် မိန်းမဆိုတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့လက်နဲ့ ကိုယ့်ဒုတ်ကို အကိုင်ခံလိုက်ရလို့လားမသိ နောက်ကို တွန့်ခနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး ကျင်တက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ နောက် မပြောမဆိုနဲ့ ဇင်ဟာ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ကိုင်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထည့်ပြီး စစုပ်လိုက်တာမှာတော့ ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အကျောအချဉ်ပေါင်းများစွာကို တချက်ထဲနဲ့ ချုပ်ကိုင် ထားလိုက်သလိုပါပဲ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မိန်းမတယောက် ကိုယ့်ကိုဒူးထောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဒုတ်ကိုစုပ်ပေးနေတော့ အားနာတာလား သနားတာလား တချိန်ထဲနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပေါင်းစံကို စုခံစားလိုက်ရလို့နဲ့တူတယ် ... ခြေထောက်တွေက ဆက်ရပ်နိုင်စွမ်းအား မရှိတော့ပေမဲ့ ကြိုးစားရပ်နေတုန်း ...ဇင့် ရဲ့ စုပ်ချက် ငါးချက် ခြောက်ချက်မှာတင်ကို..ကျွန်တော်မဟန်နိုင်တော့ပါ။
“ ဇင်... ဇင်....”
ပြန်မဖြေဘူး စုပ်နေရင်းတန်းလန်း ပါးစပ်ထဲမှာ ဒုတ်ကအပြည့် ဖောင်းကားလျက် ကျွန်တော့်ကို မော်ပြူးကြည့်ပြီး ဘာလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မျက်ခုံးပင့်ပြနေရာ...
“ ကိုကြီး ပြီးတော်မယ်.... မရတော့ဘူး.... ”
ဟုပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ပါးစပ်က အမြန်ဖြုတ် ထမတ်တက်ရပ်ခါ သူလက်တဖက်နဲ့ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ထုပေးနေတော့တယ် ပါးစပ်ကလည်း တပစ်တောက်တောက်နှင့်
“ အဲဒါကြောင့် မပြောဘူးလား... ”
ဂွင်း လေးငါးခြောက်ချက်တောင် မကျော်လိုက်ပါ ဒုတ်ထဲမှ အရည်တွေ အပြင်ကို ထွက်ကုန်ပြီး။ ကာမဆိုတဲ့ အရာသာကို ခံစားလိုက်ရတော့တယ်။ သူကတော့ ဆက်ထုပေးနေတုန်းပါပဲ။ အရည်တွေ ကုန်လောက်ပြီဆိုမှ သူရပ်ပြီး သူ့လက်မှာ အနည်းငယ်ပေနေတာတွေကို ရေးဆေးနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အနည်းငယ် မောဟိုက်သွားလို့ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်အမောဖြေနေတယ်။ သူ့ လက်တွေရေဆေးပြီး ..
“ အိပ်ခန်းထဲ သွားမယ်လေ... ”
ကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ် ။ ပြန်ဖြေဖို့ ခုလောလောဆယ် အင်အားသိပ်မရှိသလို ခံစားရလို့....သူကျွန်တော့်ကို တချက်ပြုံးကြည့်နေရင်း ..
“ ဖြစ်ရဲ့လား အပေါ်ကော တက်နိုင်ပါ့မလား ... ဘာလဲ ပွေ့ခေါ်ရမှာလား.....”
ကျွန်တော် သူ့ကိုကော ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော်ပါ ကြည့်ပြီး ရယ်မိတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ဘာအ၀တ်အစားမှ မကပ်လို့လေ။ သူ့ အတွက်တော့မထူးဆန်းချင် မထူးဆန်းပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာပဲ.။ သူ ကျွန်တော့်အနားကပ်လားပြီး ကျွန်တော့်လက်ကို မြောက် ဂျိုင်းအောက်ကို ခိုဝင်ပြီး ကျွန်တော့်ကို တွဲခေါ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ အိမ်အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းဆီသို့ နှစ်ယောက်သားတက်သွားတော့သည်။
ကျွန်တော် ဇင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းနေတုန်း ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူဂျိုင်းအောက်က လျိုပြီး သူမျက်နှာလေးကို ကိုင် နမ်းနေတုန်း...
“ ကိုကြီး ဇင့် နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းရင် ဇင့် ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တွေကြားထဲ လက်ချောင်းတွေထည့်ပြီး ဆုပ်နယ် ဆွဲကိုင်ပေးပါ ..ပိုပြီး အရသာရှိတယ် ကိုကြီး ရယ်..”
ဘာမှပြန်မပြောပဲ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆက်နမ်းနေရင်း သူပြောတဲ့ အတိုင်း သူ့ခေါင်းပေါ်က ဆံချည်မျှင်တွေထဲ လက်ချောင်းတွေ ထိုးထည့် ဆုပ်ကိုင်ဆွဲစုပ် အားထည့်နမ်းလိုက်တော့တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေက တဆင့် သူ့ရဲ့ နားရွက်လေးတွေကို ဆက်နမ်းလိုက်တယ်။ ပါးလျပြီး သန့်ရှင်းနေတဲ့သူရဲ့ နားရွက်သေးသေးကို နမ်းရတာ အရသာ တမျိုးပါလား...
“ အားး.. အီးး.. ကိုကြီး ဘာလုပ်တာလဲလို့ နားရွက်ကို နမ်းပဲ နမ်းလေ ဘာလို့ လျှာကြီးနဲ့ နားထဲထိုးကလိနေတာလဲ ..”
“ သိဘူးလေ ဇင်က နမ်းလဲနမ်းရမယ် စုပ်ရမယ်ဆိုလို့ လျှာနဲ့လည်း ထိုးကလိရမယ် ထင်လို့လေ အဟိ...”
ဟုပြောပြီး ဇင့် လည်တိုင်လေးတွေကို ဆက်နမ်းလိုက်တယ်။ လည်တိုင်လေးကို နမ်းနေရင် လက်က ဇင့်ရဲ့ နို့လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ ဇင့်ရဲ့နို့လေးကို စိတ်စောစွာ အရမ်းကို စုပ်ချင်နေမိပြီ။ အလိုက်သင့်ဆိုသလို ဇင့် လက်တွေက အောက်ကို သွားလို့ ရပြီဆိုတဲ့ သဘောမျိုး အောက်ကိုတွန်းချနေတာကြောင့် ဇင့် ရင်သားလေး နဲ့ အတူ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့လိုက်တော့တယ်။ စို့နေတုန်း ဇင့် လက်က ကျွန်တော့်လက်ကို ကိုင်ပြီး ဇင့် ခရုလေးရှိရာနေရာကို ပွတ်ခိုင်းနေတာကြောင့် ဇင့် ရဲ့ အက်ကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း စမ်းပြီးပွတ်လိုက်တော့ ရွဲနစ်နေတဲ့ အရည်လေးတွေကို အရင်စမ်းမိလေသည်။
ဇင့် ရဲ့ နို့လေးတွေကို နမ်းရတာ မ၀ဘူးဆိုပေမဲ့ ဇင့်ရဲ့ ခရုလေးကို အရမ်းကို နမ်းချင်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပဲ ၁၀မိနစ်ကြာအောင် နမ်းရမှာလား မသိ။ ခုထိအောက်ကို ဆင်းခွင့် အမိန့်မရသေးလို့ ဘယ်ညာပြောင်းစို့လိုက် ဇင့် ရဲ့နို့ဘေးသားလေးတွေကို နမ်းစုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်တော်တော်ကြာတော့ ဇင့် လက်တွေက ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး အောက်ကို တွန်းပို့နေလို့ အရမ်းကို ပျော်မိတယ်..ဒါပေမဲ့...
“ ဇင့် ညီမလေးကို နမ်းနဲ့ အုန်း ဇင့် ပေါင်သားနေရာ အနှံကို သွားနဲ့ ကိုက်ပေးပါ...”
ကျွန်တော် ခေါင်းလေးထောင်ပြီး သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဇင်က ကျွန်တော့်လက်တဖတ်ကို ဆွဲယူပြီး ညင်ညင်သာသာ ဖွဖွလေး ကိုက်ခဲလိုက်တော့ လူကိုကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထသွားတယ်။ ဆရာ မပြတော့ ငပိတောင် မဖုတ်တတ်တာ ဟုတ်မယ်။ ချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်လို့ ဇင့် ရဲ့ ဘယ်ညာပေါင် နေရာအနှံ့ကို လက်ကလည်း ဆုပ်နယ်ရင်း ကျွန်တော့်သွားလေးတွေနဲ့ ညင်သာစွာ ကိုက်လိုက်တော့တယ်။
“ အား အီးး အားး..၀ူးးးးးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး ကောင်းတယ် ကိုကြီးရယ်...”
ဇင် ခေါင်းလေးထောင်ပြီး မျက်နှာ အမူအယာပျက်လျက် အော်နေတော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဇင့် ခရုလေးရှိရာလေးရှိရာ နေရာကို သူ့လက်လေးတွေရဲ့ ဖေးမမှုနဲ့ ရောက်လာပြီး အစွမ်းကုန် စုပ်နမ်းပစ်လိုက်တော့တယ် ။ ဇင် သူ့ခြေထောက်လေးတွေကို အသားကုန် ဆန့်ထုတ်ပြီး ငြီးငြူနေရှာတော့တယ် ။ ဒါနဲ့တင်အားမရသေးဘူး...
“ ကိုကြီး .... ကိုကြီး လျှာနဲ့ ဇင့် ညီမလေးထဲ ထိုးထည့်ကလိပေးပါအုန်း... အီးးးးးး..”
အရသာလေးကတော့ နည်းနည်းငံချွဲချွဲလေးရယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်လိုက်လို့ တဖက်လူမှာ မခံချိမခံသာဖြစ်သွားတဲ့ အရသာက တမျိုးပါလားနော်လို့ ကျွန်တော်တိုးပြီး စုပ်လေလေ ဇင့် လူးလဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို အားနဲ့ဆုပ်ကိုင် ဆွဲဆောင့်နေတော့ နာပေမဲ့ နာမှန်းကို မသိတဲ့ ဘ၀ရောက်နေတယ်။ သူ့ပါးစပ်ကလည်း ကိုကြီး ကိုကြီးနဲ့ တတွင်တွင် အော်ပြီးနောက် ကျွန်တော့် မျက်နှာကို ဆွဲယူ ငုံကြည့်ပြီး..
“ လာတော့ ကိုကြီး ဇင် ...မရတော့ဘူး ... ကိုကြီးရယ် ”
မျက်နှာလေးကို မဲ့ပြီး ပြောနေတုန်း ကျွန်တော် သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို အရင်ဆုံး နမ်းလိုက်တော့တယ်။
အ၀တ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ခြင်း ထိတွေ့တဲ့ အရသာကတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ယုံကြည်မှု ချစ်ခင်မှု ကြင်နာယုယမှုတွေ အဆုံးအစွန်ထိအောင် ရလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဇင့်ကို နမ်းနေတုန်း ဇင့် လက်လေးက ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို လှမ်းကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတ်ဒ-်ကလေးနှင့် သူ့ရဲ့ ရွှေခရုလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းဝကို အသာတေ့ ကလိပြီး
“ ကိုကြီး... ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထည့်တော့...”
ကျွန်တော်စကားပင် ပြန်မပြောနိုင်တော့ပါ ရင်ခုန်မှုက အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်နေပြီမှတ်လား ။ ဇင် အောက်က အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားပေးမှုနဲ့ အတူ ကျွန်တော်အသာထိုးထည့်လိုက်တာကြောင့် ဒ-်မြုပ်ရုံကလေး ၀င်သွားတော့ ..
“ ဆက်မထိုးထည့် နဲ့ အုန်း.... အဲလိုလေး ၁၀ ခါလောက် အရင် လုပ်ပေးပါ ကိုကြီးရယ်...”
ကျွန်တော် ဒူးတွေမခိုင်ချင်တော့ပါ။ လူတကိုယ်လုံးရဲ့ စိတ်တွေ ခွန်အားတွေ အာရုံတွေက ကျွန်တော့် ဒုတ်မှာ စုစည်းလို့ နေလေပြီ။ ဇင်ပြောတဲ့ အတိုင်း ဒုတ်ရဲ့ အဒ-်လေးတင် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် ၁၀ ချက်ကျော်လောက်မှာ ဇင်က ကျွန်တော့်တင်ပါးကို သူ့လက်လေးတွေနဲ့ ကိုင်ပြီး..... ရပြီ အဆုံးသာထည့်တော့လို့ ပြောသယောင် တွန်းအားပေးလာတာကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတ်ကို ဇင့်ရဲ့ ရွှေခရုလေးထဲကို အသားကုန် အဆုံးထိထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်....
“ အား....အီးး... ၀ူးးးးး .. ကိုကြီး... ကိုကြီးး.... ကိုကြီး...၀ူးးးးးး ..”
ဇင့် ပါးစပ်က တအား ငြီးငြူရင်း ပါးစပ်ကလည်း ကိုကြီး ကိုကြီးနဲ့ တသွင်သွင် ခေါ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလို့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို အားကုန်အဆုံးထိ ထပ်မံထိုးထည့်ပြီး ဇင့်ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ ဇင့် လက်လေးတွေက ကျွန်တော့် ခါးကို လှမ်းကိုင်ပြီး အနည်းငယ်တွန်းထုတ်ပြီး ပြန်လည် ဆွဲသွင်းတာကြောင့် လုပ်လို့ရပြီးဆိုတော့ သဘောကြောင့် ကျွန်တော်ခပ်မှန်မှန်လေး ထိုးထည့်လိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် မှန်မှန်လေး လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ထူးဆန်းဖွယ်ရာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဒုတ်တချာင်းလုံး မိန်းမတယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း အထက်စီးကနေ လုပ်လိုက်ရလို့ ပြောမပြနိုင်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားလိုက်ရတယ် ။
“ ကိုကြီး ....ခပ်မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး.. ..”
မျက်နှာလေးကို မဲ့ရှုံ့လျက် သူ့ရဲ့ရင်သားတွေ ကော့တက်လာပြီး ပေါင်ကို အစွမ်းကုန်ကား ခါလေးကို အပေါ်မြင့်တင် ကော့ပေးပြီး ပြောလိုနေပြီ။ ကျွန်တော်အားကုန်တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ဆောင့်ပြီး လုပ်လိုက်တော့ ဇင် မျက်ဖြူလေးလှန်ပြီး ဖီးလ်အပြည့်ယူနေတယ် ထင်ပ။ ပါးစပ်ကလည်း ကျွန်တော်ဘ၀မှာ မကြားဖူးတဲ့ ငြီးငြူသံ ပေါင်းစုံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်မရပ်တန်း တရပ်စပ် ဆောင့်ထိုးနေတုန်း သူခါလေး ကော့နေရာက ပျော့ကျလာပြီး သက်ပြင်းတိုးတိုးလေးချသံကြားပြီး ..ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး... အသက်ရှုသံခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ အတူ...
“ ကိုကြီး ....ကိုကြီး.....အားးးးး... ကိုကြီးကို ..၀ူးးးးးး........ .ကိုကြီးရယ် .. အီးးးး”
ဇင့်အသံလေးကို ကြားလိုက်လို့လား ...ဇင် နဲ့ အထိတွေ့ အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်သွားလို့ထင်တယ်.. ကျွန်တော်ပြီးချင်လာသလို့ ဖြစ်လာပြီး ...
“ ကိုကြီး ထွက်တော့မယ် ထင်တယ် ..ဇင်..”
မျက်လုံးလေး မှေးစင်းနေတဲ့ ဇင် ချက်ခြင်းဆိုသလို မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ ကျွန်တော့်ပါးလေးတွေကို ကိုင် မော်ကြည့်ပြီး...
“ ပြီးခါနီးရင် ပြောနော် ကိုကြီး ......”
ကျွန်တော်နောက်ဆုံး လက်ကျန်အားနဲ့ ဇင့်ကို အားကုန်ဆောင့်ထိုးထည့်ရင်း
“ ခု ပြီးတော့မယ် ဇင် ... အခုပဲ..”
“ ဒါဆိုအပြင်ကို ထုတ်လိုက်တော့....”
“ ဘယ်အပြင်ကို ထုတ်ရမလဲ ဇင်.... အ...အ..”
ဇင့်လက်ကလေးက လျင်လျင် မြန်မြန်ပဲ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို သူ့ရွှေခရုလေးထဲမှာ ဆွဲထုတ်ပြီး ...ဇင့် ဗိုက်ပေါ်တွင် ပင် ကျွန်တော့် ဒုတ်ကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးသလို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ငါးချက်လောက် ထုပေးလိုက်သည်မှာတော့ ကျွန်တော့ ရင်ထဲနှင့် ကျွန်တော်ဒုတ်မှာပါ တထိန်းထိန်းနဲ့ ကာမဆိုတဲ့ အရသာကို အထွဋ်အထိပ်ကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဒုတ်မှ အရည်တွေဒလဟော ထွက်ကျလာပြီး ဇင့်ဗိုက်လေးပေါ်တွင် ပေကျံလို့ နေလေပြီ။
ဇင်ကတော့ ကျွန်တော့် ဒုတ်ထဲမှ သုတ်များထွက်ကျသွားသည့်တိုင် ဂွင်းထုပေးနေတာကို မရပ်သေးပဲ ကျွန်တော့်မျက်နာလေးကို မော်ကြည့်ရင်း ဆက်ထုပေးနေတော့တယ်။ ရင်ခုန်မောဟိုက်ခြင်း နှင့်အတူ ဇင့် ကိုယ်ခန္ဓာလေးပေါ် လှဲချ ဇင့်ကို တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားပြီး ကျွန်တော့်ရင်ထဲက တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားချက် ကျွန်တော့် နှလုံးသားက လာတဲ့ စကားလေးကို သူ့ကိုပြောလိုက်တော့တယ်...
“ ကိုကြီး ...ဇင့် ကို တအား ချစ်တယ် ဇင် ရယ်....”
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ ဇင် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဆွဲယူပြီး သေချာကြည့်နေတယ်။ သူ့အကြည့်က ပြုံးနေတာလိုလို လှောင်သလိုလို မယုံသလိုလို အဓိပ္ပါယ်ပေါင်းများစွာပါနေတယ်။
“ ဘာပြောတာလဲ မကြားလိုက်လို့.....နောက် တခေါက်လောက် ပြန်ပြောပါအုန်း.... ”
ကျွန်တော့်သူ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တချက် နမ်းလိုက် ပြီး..
“ .. ကိုကြီး ဇင့်ကို အရမ်းချစ်တယ် ဇင်ရယ်...”
ဟုပြောပြီး ဇင့် ရင်ခွင်ပေါ်မှာတင် ကျွန်တော့်နားကိုအပ်ကာ အိပ်စက်လိုက်ပါတော့တယ်။
“ တီ..တီ..တီ............ တီ..တီ..တီ......... တီ..တီ..တီ....”
အိပ်နေရင်း နာရီနှိုးစက်ကြောင့် လန့်နိုးသွားတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် ကုန်းရုန်းထလိုက်တယ်။ နာရီကို အလမ်းကိုပိတ်ပြီး သေချာ ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၃နာရီပဲရှိသေးပါလား။ ငါ ညက နာရီကို နှိုးစက်မပေးထားပါဘူး... ဘယ်လိုဖြစ်လို့ မနက်၃ နာရီကြီး ထမြည်နေတာပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားလို့ ကိုမရဖြစ်နေပြီး ကုတင်ပေါ်ပြန်လှည့်လိုက်တော့ ဇင်ပါနိုးနေတယ်။ မျက်လုံးလေး ပိတ်ထားပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ် သူ့မှာ အိပ်နေရင်း တန်းလမ်း မထချင်ထချင် နဲ့ နိုးလာတဲ့ ပုံ....
“ အယ်.. ဇင်ပါ နိုးလားတာလား ဆောရီးဇင် ရယ် ..ဆောရီး ...ကိုကြီး နာရီအလမ်းမေ့ပြီး ပေးထားတာ ... ပြန်အိပ်နော်... ဇင် အိပ်ရေးတွေတော့ပျက်ပါပြီ ”
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ ဇင် ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးလေးဖွင့်လာပြီး မျက်စောင်းလေးထိုး မျက်မှောင်ကျုံ့ နှုတ်ခမ်းလေးစူရင်း ...
“ ဘယ်လို လူကြီးလဲ မသိဘူး......”
“ ကိုကြီး တောင်းပန်ပါတယ် နော်... ပြန်အိပ်နော်... ”
“ ဟာ.. အဲဒီ အလမ်း ဇင် ပေးထားတာ..... ညက...”
“ အမ်... ဘယ်လို..”
နှုတ်ခမ်းလေးကို ထပ်စူနေပြီး ပါးစပ်ကလည်း ကျွန်တော်မကြားအောင် တပြစ်တောက်တောက်ပြောနေတယ်.... ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လို နားလည်ရမလဲ ဖြစ်သွားတယ်... မနက် ၃နာရီ သူပဲ အလမ်းးပေးထားတယ် ဘာလုပ်ဖို့ပါလိမ့်လို့ တွေးနေတုန်း...ဇင် ကျွန်တော့်ပုခုံးကို တွန်းထုတ်ပြီး...
“ သွား ညက ညစ်ပတ်နေတာတွေ သေချာပြောင်အောင် သွားဆေး..”
ကျွန်တော်လည်း အိပ်ချင်နေပေမဲ့ ဇင် ပြောတဲ့အတိုင်း ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြီး ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို သေချာ ဆေးကြောလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းက ထွက်လာတော့ သူလည်းရေချိုးခန်းဝင်ပြီး ရေဆေးသံတွေ ကြားနေရတယ်။ ဇင် ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတော့ တကယ့်ကို လန်းဆန်းပြီး တက်ကြွနေတဲ့ပုံလေးနဲ့ ပြုံး
ရွှင်ပြီး ထွက်လာတယ်.. ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ညို့အားပြင်းပြင်းရှိတဲ့ ဆွဲငင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ပြီး တလှမ်းခြင်း ကုတင်ဆီ လျောက်လာတယ်။ နောက် ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းကို စနမ်းတယ်။
နောက်ပြီး လည်ပင်းလေးကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လည်ပင်းကတဆင့် ကျွန်တော့်ရင်ညွန့်နားမှ တဆင့် ကျွန်တော့် နို့သီးလေးတွေကို နမ်းစို့လိုက်လေတော့ ကျွန်တော့် ဒုတ်ဟာ ကိုးဆယ် ဒီကရီထောင်တက်လာတာမဟုတ်တော့ဘဲ အရှိန်လွန်ကာ ကျွန်တော့်ကိုတောင် ပြန်ရန်ရှာမယ်ပုံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ချိန်နေတော့တယ်။ ခုမှ ဇင် လုပ်နေတာတွေကို သဘောပေါက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေပြောတာကို သတိရမိလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာဦးညမျိုးတွေမှာ တညလုံးလုပ်တာကို သတိရပြီး ကိုယ့်ကိုကို အပြစ်တင်လို့ မဆုံးဖြစ်မိတယ်။ ဇင် နမ်းနေတာ ကျွန်တော့်ချက်မှ တဆင့် ကျွန်တော့ ဒုတ်ကိုသေချာလက်လေးနဲ့ ကိုင်ပြီး နမ်းပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ရင်တွေ ခုန်ရုံတင်မကပါဘူး သူတချက် စုပ်လိုက်တိုင်း အသက်ပါပါ သွာမလားတောင် အောင်းမေ့ရပါတယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို စုပ်နေတဲ့ ပုံက တကယ့်ကို လိုလိုချင်ချင် အစားအသောက်တခုကို တက်မက်စွဲလမ်းစွာ သုံးဆောင်နေသလိုပါပဲ။
အားးး တွေးနေတုန်း ဇင် ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို စုပ်နေရာမှ ကျွန်တော့် ဥအောက်ခြေတွေကိုပါ ပယ်ပယ်နယ်နယ် လျက်လိုက်ရာ အသည်းတွေ ပြုတ်ကျမတတ် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်ဆက်လက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့လို့ ဇင့် ကို ဆွဲခေါ်မယ် အလုပ် ကျွန်တော့ရင်ဘက်ကို တွန်းထိုးပြီး ကျွန်တော့်အပေါ်မှ တက်ခွတော့
တယ်။ နောက် ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို ကိုင်ပြီး သူ့ ရွှေခရုလေး အတွင်းကို ဖြည်းညုင်း ညင်သာစွာ ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။ ကျွန်တော့် ဒုတ်တချောင်းလုံးဝင်သွားတော့ သူ ခါးကို ကော့ခေါင်းကိုမော့ ငြီးငြူပြီး ခဏမျှငြိမ်သက်နေပြီး ဖြည်းဖြည်းခြင်း စတင်ဆောင့်ပါတော့တယ် ။ ကျွန်တော်အောက်ကနေ အလိုက်သင့်လှုပ်ရှား
“ ကိုကြီး ဇင့် နို့လေးတွေကို ပွတ်ပေးပါ ပါးစပ်ကလည်း စုပ်ပေးပါနော် ... နော်ကိုကြီး...”
တကယ့်ကို အသနားခံနေတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ပြောနေတော့တယ် ဇင့် မျက်နာလေးမှာလည်း မဲ့ရှုံ့ နေပြီး ဇင့် ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကလည်း တအားကို မြန်ဆန်လာပါတော့တယ်။ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သူဆောင့်နေတာက ရပ်ပြီး စကောဝိုင်းပုံစံ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ ဝေ့ ရမ်းနေပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်လာပြီး.. ငြီးသံ ကလည်း ပေါင်းစုံထွက်လာသလို ဇင့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက တအားမြန်လာတော့တယ်။ ကျွန်တော့်လည်း သူ နို့လေးကို သူပြောတဲ့ အတိုင်း စို့နေတာတမျိုး အားနေတဲ့ကျန်တဲ့ နို့တလုံးကို ပွတ်သပ်ပေးနေရတာမို့ ကျွန်တော်ဇက်မှာလည်း အလွန်ညောင်းလာနေပါပြီ။ နောက်ဆုံး ဇင် ပြီးခါနီးလို့ ထင်တယ် ဇင် ကျွန်တော့်ပေါ်မှာ အားကုန်ဝေ့ရမ်းနေရင်း ....
“ အားးး...အားးး ကိုကြီးးး ကိုကြီးး ကိုကြီးးးး..... အားး...အားး... ကိုကြီး...အာ..ကိုကြီး...”
ဖြည်းဖြည်းခြင်း ငြိမ်သက်သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားတော့တယ် ။ ဇင့် ရဲ့ရင်သားတွေနဲ့ ရင်ခြင်းထပ်နေတော့ သူပြီးသွားတဲ့ ရင်ခုန်မှု တုန်လှုပ်နှုန်းတွေကို အထင်အရှားကြီး ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဇင်အတော်လေးကို မောဟိုက်နေပြီ ကျွန်တော့်ပေါ်ခွလျက်ပင် အချိန်ကြာကြာ အမောဖြေနေတော့တယ်။
ခဏကြာတော့ သူဘေးကို လိမ့်ဆင်းပြီး ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲ ထခိုင်းပြီး သူကတော့ ဖင်ကို ကုန်းနေအောင် ထောင်ပေးထားတော့။ ဇင်ကတော့ သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဦးခေါင်းကို ကုတင်ပေါ်တင် ပြားပြားတင်လျက် ကျွန်တော့်ကို တစောင်းလေး မှေးစင်းပြီးကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဇင်နောက်မှနေ၍ ဒူးထောက်ပြီး ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဇင့် ရဲ့ ရွှေခရုလေးထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထိုးထည့်ပြီး စတင် ခပ်မြန်မြန်လေး လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။ ဇင် အောက်မှ နေ၍ အသံမျိုးစုံနေအောင် ပြုရင်း..
“ ကိုကြီး ကိုကြီး... မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး.....”
ဇင် ပြောတဲ့ အတိုင်း အမြန်ဆုံး လုပ်လိုက်တယ်...
“ ဟာ.... ဒါအား အကုန်ပဲလား အားနဲ့ ဆောင့်စမ်းပါ ကိုကြီးရာ...”
ကျွန်တော် လုပ်နေတာကို ခဏရပ်ပြီး ဇင့်ကို သေချာ စူးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ကျွန်တော့်အားကုန် အချက်ပေါင်းများစွာ ဆောင့်ချလိုက်ရာ ဇင့် ကျွန်တော့် လက်တွေကို နောက်ပြန်ကိုင် မျက်နာအပျက်ကြီး ပျက်ပြီး ...ဇင့် ရဲ့ အော်သံဟာ အခန်းတစ်ခုလုံး ဆူညံသွားပါတော့တယ်။
မနက်အစောကြီးထနေကျ အကျင့်ကြောင့် မျက်လုံးက မဖွင့်သေးပေမဲ့ စိတ်ကတော့နိုးနေပြီလေ။ အလုပ်သွားရအုန်းမှာပါလားလို့ တွေးမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာမှာ ဇင့် ကို သွားသတိရပြီး ပျော်သွားတယ်။ ဇင်လည်း အိပ်တုန်းနေမှာပဲ ဆိုပြီး ဇင့်ဘက်ကို မသိမသာလှည့်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ စမ်းကြည့်တော့ ဇင် မရှိ။
မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ချက်ခြင်းထထိုင်ပြီး ဇင့်ကို ကြည့်တော့ ဇင် ကုတင်ပေါ်မှာ မရှိသလို အခန်းထဲမှာလဲ မရှိ။ လူကိုထိတ်သွားတယ် ကိုယ်ပေါ်ကစောင်လေး အမြန်ဖယ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲရောက်နေမလားလို့ အမြန်ပြေးကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ လော့ချထားပြီး ရေချိုးနေသံကြားရတယ်။ တံခါးကို ခေါက်မယ် ကြံပြီးခါမှ ဇင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ရပ်စောင့်နေလိုက်တယ်။ ဘယ်အချိန်ထဲက ထရေချိုးနေလဲ မသိဘူး။ ဘယ်လောက်ကြာကြာမှ မစောင့်လိုက်ရ ဇင် တဘက်လေးရင်လျားလေးနဲ့ ခေါင်းကို ဆံပင်တွေ ကိုလည်း အခြားတဘက်တထည်နဲ့ သူ့ခေါင်းလေးကို စောင်းပြီး သုတ်နေတယ်။
“ ဇင် ဘာလို့ ရေအစောကြီး ထချိုးနေရတာလဲ ..”
ပြန်မပြောဘူးဗျ.. မှန်တင်ခုန်ရှေ့ကို သွားထိုင်ပြီး ဆံပင်တွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် သုတ်နေတယ်။ ဇင် ဆံပင်ကို ရေပြောင်အောင် သုတ်တော့ မှ Hairdryer ကိုသတိရပြီး ...
“ ဇင် ဒီမှာ Hairdryer ရှိတယ်လေ... ”
ဇင် ကျွန်တော်ညွန်ပြတဲ့ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို သေခြာကြည့်နေတယ် ကျွန်တော်ပဲ မီးဖွင့်ပြီး ဇင့် ဆံပင်လေးတွေကို ညင်သာယုယစွာ အခြောက်ခံလေမှုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဇင် မှန်ထဲကနေ ကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်ပြီး ပြုံးနေတယ်။ ဇင် ကြည့်နေတာ သိပေမဲ့ မသိချင်ယောင်ပြီး သူ့ကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပြလိုက်တယ်။ ဇင့်ကို ကျွန်တော့်ဘ၀လေးထဲက ထွက်ပြေးသွားမှာကို တကယ့်ကြောက်မိနေလို့ပါ။ ဇင် အရင်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို အားလုံးကို ခွင့်လွတ်ပြီး ချစ်သွားမယ်လို့ ကိုယ်ကိုကို မယုံကြည်မိခဲ့ဘူး။ ခုတော့ အားလုံးကိုတောင် မေ့နိုင်နေပြီလေ။ ဇင့် ဆံပင်လေးတွေကို ကျွန်တော် အခြောက်ခံပေးနေရင်း..
“ ဇင် ..”
“ ကိုကြီး မေးနေတာ ဖြေ အုန်းလေ..”
ဘယ်လိုမိန်းကလေးလဲ မှန်းမသိဘူး ပြန်ကိုမပြောတာ။ ကျွန်တော့် မှန်တင်ခုန် အံဆွဲထဲမှာ မိန်းကလေး အလှအသုံးပစ္စည်းများ ရှိမလာလို့ ရှာဟန်တူပါတယ်.။ ဇင့်ရဲ့ ဖြူဖွေးနေတဲ့ ပုခုံးလေးကို ညင်သာစွာနမ်းလိုက် တယ်.. နောက် လည်တိုင်းလေးကိုပါ ညင်သာယုယစွာ ထပ်နမ်းလိုက်ပြီး သူ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းလိုက်ရင်းး.
“ အစောကြီး ဘာထလုပ်တာလဲ လို့..”
“ အလုပ်သွားရမယ် ကိုကြီးရဲ့ .. ”
ဇင် ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်တော် ဇင် ထိုင်နေတဲ့ အရှေ့မှာ ဒူးထောက် ဇင့် လက်လေးတွေကို သေချာယုယကိုင် ဇင့် မျက်နှာလေးကို သေချာကြည့်ပြီး..
“ ဇင် ရယ်... ကိုကြီးပြောတာ သေချာနားထောင်နော်.... ဇင် ဒီနေ့ကစပြီး ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာမလိုဘူး ဇင် ကိုကြီးနဲ့ပဲနေ ဇင် ဟာ ကိုယ့်ချစ်သူ ဇင် ဟာ ကိုယ့်ဇနီး မယား ဖြစ်သွားပြီ ..ဇင် ဟာ ကိုကြီး ဘ၀ပဲ...”
ကျွန်တော့် တကယ့်ကိုလေးလေးနက်နက် သူကိုကြည့်ပြောလိုက်တော့တယ်။
“ နေပါအုန်း ကိုကြီးရယ် စောပါသေးတယ်...”
“ ဘာကို စောတာလဲ ဇင်ရယ် ဒီ အချိန်အတိုလေး အတွင်းမှာမို့ ဇင်က ကိုကြီး အချစ်တွေကို မယုံတာလား.. ဒါ ဇင့် အိပ်ဖြစ်သွားပြီနော်.. ဇင် ပိုင်တယ်...”
“ ကိုကြီး ကိုကြီးဟာက လောကွတ်တွေ ပိုနေပြီ ထင်တယ်..”
“ ကိုကြီးရယ် ဇင်နဲ့ ကိုကြီးကြားမှာ အချိန်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်.. ခု အိမ်မှာ အမေရယ် နေမကောင်းဘူး ထီဆိုင်ကို မသွားခင် သွားကြည့်မှ ဖြစ်မယ်”
ဇင် ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ညင်သာစွာ တွန်းဖယ်ပြီး သူ့အကျီတွေ ရှာဝတ်နေတော့တယ်။ နောက် သူအိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းသွားတော့ ကျွန်တော်ပါလိုက်ဆင်းလာပြီး ... ကျွန်တော် ကဗျာကယာပဲ ကျွန်တော့်ဗီထိုထဲမှာ ပိုက်ဆံ နှစ်သိန်းကို အမြန်ထုတ်ပြီး အိမ်အောက်ကို ပြေးဆင်းလိုက်တယ်။ အိမ် ထမင်းစားခန်းရှိ ရေခဲသေတ္တာထဲမှရေအေးအေးကို ဇင် သောက်နေတယ်။ ဇင် ရေသောက်နေတုန်း ဇင့်နောက်ကနေ ဇင့် ခါးလေးကိုဖက် ဇင်တင်ပါးလေးကို ကျွန်တော့်ကိုယ်နဲ့ ပူးကပ်ထားလိုက်တယ်..
“ ဇင် ..ပြန်ချင်ရင်လဲ ပြန်လေ... ဒါနဲ့ ကိုကြီးက ဇင့်ကို ဘယ်နေရာလာရှာရမှာလဲ ..”
“ ဖုန်း နံပါတ်ပေးလိုက်လေ.. ဇင် ခေါ်လိုက်မယ်.. ”
“ အိုကေ.. ”
ကျွန်တော် ပျော်သွားတယ် ဇင် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ်ပါတဲ့ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ ကုပ္မဏီလိပ်စာကဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပြီး။ ကျွန်တော်မျက်နှာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ညိုးငယ်စွာဖြင့် ယူလာတဲ့ ပိုက်ဆံ နှစ်သိန်းအား ဇင့်ကို ထောင်ပြရင်း...
“ ဇင် ဘယ်လိုမှ တော့ စိတ်ထဲနဲ့ သိလား .. ဇင့် မေမေ အတွက် လို့ သ....”
ကျွန်တော် စကားမဆုံးခင်မှာပဲ ...
“ ဘယ်လောက်လဲ ပိုက်ဆံက...”
“ ဘယ်လောက်မှ မရှိပါဘူး နှစ်သိန်းထဲပါ ... မလောက်လို့လား ကိုကြီးထပ်သွားယူလိုက်ရမလား...”
သူ ပြုံးနေတော့ ကျွန်တော့် ပျော်မလို့ ကြံနေတုန်း...
“ ဘယ်ဆိုးလို့လဲ ဇင်က တညထဲကို နှစ်သိန်းတောင် တန်ပါလား.... အကြီးစားဖာ ပဲနော်... အဟတ်ဟတ်..”
“ ဇင် ရယ် အဲလို သဘောနဲ့ ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး ဇင် ရယ် ... ကိုကြီး စေတနာကို နားလည် စမ်းပါ... ”
ကျွန်တော်ပြောနေပေမဲ့ သူမျက်နာက ခက်ထန်မာကျောလာပြီး.........
“ မှတ်ထား ... နောက် တခါ ကျွန်မကို ငွေ နဲ့ လာလာ မလုပ်နဲ့.. နောက်တခါဆို ကျွန်မကို ဘယ်တော့မှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး..”
ဇင် ပြောနေပြီး သူ့ မျက်လုံးလေးတွေမှာ မာနတွေနဲ့ အတူ မျက်ရည် အစွန်း အစလေးတွေကို ပါတွေ့လိုက်ရလို့.. ကျွန်တော့်သူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ချ သူ့ရဲ့ တင်ကို တင်းကြပ်စွာဖက်ထားပြီး..
“ ဟုတ်ပြီ.. ဇင်ရယ် ..ဟုတ်ပြီ.. ကိုကြီးမှားတယ်... စိတ်ကို လျော့နော် နော် ဇင်...”
ဇင့်ကို ဖက်ထားပြီး ကျေနပ်အောင် ချော့မော့တောင်းပန်ရင်း ဇင့်ကို နမ်းမယ် အလုပ်... အိမ်ဖုန်း Ring သံမြည်လာတာကြောင့်...
“ ဇင် ခဏနော် ဖုန်းလာနေလို့ ခဏလေး ခဏလေး...”
ကျွန်တော် အမြန်ပြေးပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ်။ ဖုန်းခေါ်တာ တခြား သူမဟုတ် ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖေဖြစ်နေတယ်။
“ သား.... အလုပ်မသွားသေးဘူး မဟုတ်လား...”
“ ဟုတ်ကဲ့ အဖေ.. ခုတင် သွားမလို့...”
“ အေး.. မင်းအမေက မင်းနဲ့ စကားပြောချင်လို့တဲ့...”
“ ဟုတ်ကဲ့ အဖေ.. အမေ့ကို ပေးလိုက်လေ ဖုန်း ..”
အမေ ဖုန်းလာမကိုင်ချင် ကျွန်တော် ဇင့်ကို တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ် အိမ်ပေါက်ဝမှ ကျွန်တော့်အား မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ရပ်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အား ခဏလေးနော် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ လက်ကလေး ကာပြလိုက်တယ်..။
“ သားလား.... အမေပါ..”
“ ဟုတ်ကဲ့ အမေ... အမေနေကောင်းလားဟင်.. ကျမ္မာရေး ဂရုစိုက်ပါ အမေရယ် နော်..”
“ သား အမေတို့ ဒီလ အတွင်းပြန်လာတော့မယ် ဘယ်နေ့ လဲ တော့ မသိသေးဘူး ...”
“ ဗျာ ဟုတ်လား အမေ..ဟာ... ပျော်လိုက်တာ... ”
“ အေး...သား ဒီတခါပြန်လာတာ မင်းအိမ်ထောင်ပြုဖို့ မရရအောင် တိုက်တွန်းရမှာပဲ ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ ရအောင် ရှာထားပါ ..သားမှာမှ အစွမ်းအစမရှိရင် အမေတို့ ကိုယ်တိုင်ရှာပေးရလိမ့်မယ်...”
“ အမေ..... သား .... အခု..”
“ ဘာလဲ သား ..ပြောအုန်းမလို့သား သား မိန်းမယူတော့ဘူး အမေနဲ့ အဖေကိုပဲ ပြုစုပါရစေ ပြောမလို့လား.... ”
“ မဟုတ်ဘူး အမေ...”
“ သား တော်တော့ အမေတို့ အဖေတို့မှာ သူများတွေ မြေးလေးတွေ ချီတာတွေ့တော့ အမေတို့လည်း ချီချင်တယ် သားရယ်...အမေတို့ကို သနားပါအုန်း”
“ အမေ.. သားပြောတာ နားထောင်ပါအုန်း .... ဟီးဟီး.... ခု အမေ သားလေ.. ရည်းစားရပြီ အမေရေ..”
“ တကယ်လား သားကြီး.... ဟယ်.. ၀မ်းသာလိုက်တာ သားရယ်...”
“ အမေတို့သာ မြန်မြန်လာတော့ ..သား .. သားချစ်သူလက်ကို ဆွဲပြီး အမေတို့ကို ပြမယ် ...”
“ အမေ ၀မ်းသာလိုက်တာ သားရယ်...”
“ အမေ့ချွေးမလောင်းလေးက ချောချောလေး အမေရယ်... အမေတို့ မြန်မြန်တာ ပြန်လာပါတော့ ဗျို့..”
အမေတို့ အရမ်းပျော်သွား သလို ကျွန်တော်လည်း ဒီလို တခါမှမပြောဘူးတော့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အမေတို့ဘက်က ဖုန်းချသွားတော့ ဇင့် ကိုသတိရလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဇင်မရှိတော့ပေ။ အိမ်ရှေ့ ခြံဝကို ပြေးကြည့်တော့ ခြံတံခါးဖွင့်ထားပြီး သော့တန်းလန်း ဖြစ်နေတယ်.။ အော် ကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေတုန်း စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ သော့ကို သူယူပြီး အိမ်ရှေ့ခြံတံခါးကို ဖွင့် ပြန်သွားတာပဲ... ခြံရှေ့ထိ ပြေးထွက်ကြည့်ပေမဲ့ ဇင့် ရဲ့ အရိပ်အရောင်လေးတောင် မတွေ့ရတော့ပါ။
အော်.. အတော်ဝေခွဲရခက်တဲ့ ကောင်မလေးပါလား။ ကျွန်တော် ရင်ဘက်ကို ပြန်စမ်းကြည့်မိတယ် အခုထိတောင် နုလုံးသားတွေခုန်နေဆဲပါ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ချစ်မိသွားပြီ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိန်းကလေးတွေ အများကြီးပါ ကျွန်တော့်ရင်ကို ခုန်စေတဲ့သူ တယောက်မှကို မတွေ့ခဲ့ပါဘူး.။ ကျွန်တော် ညအိပ်ဝတ်ထားတဲ့ ညအိပ်ဝတ်အကျီကို ပြန်ပြီး နမ်းနေမိတယ် .....ဇင့် ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံလေး အခုထိတိုင်ရှိနေတုန်းပါပဲ.။ အိမ်ထဲ အမြန်ပြေးဝင်... ဇင် နဲ့ ညအတူအိပ်ထားတဲ့ အကျီလေးကို အမြန်ချွတ် သေချာခေါက်လိုက်ပြီး တချက် အ၀ နမ်းရှိုက်လိုက်၍ ပလပ်စတစ် အိပ်ထဲထည့် ဗီဒိုထဲ ထည့်သိမ်းထား ပါတော့သည်။
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၃) ဆက်ဖတ်ရန် »
(အပိုင်း ၁) သို့.. »